Wasaaradda caafimaadka Galmudug oo adeegyo caafimaad u fidisay dad dan yar ah – Radio Muqdisho
Wasaaradda Caafimaadka Dowlad Goboleedka Galmudug ayaa adeegyo caafimaad u fidisay Dad dan yar ah oo ku sugan xeryaha barakacayaasha ee duleeddada Magaalada Gaalkacyo.
Wasaaradda Caafimaadka Galmudug oo kaashanaysa hay’adda ,Childbirth Survival International (C.S.I) ayaa waxay si wada jir ah baaritaanno caafimaad iyo Dawayn lacag la’aan ah ugu sameeyeen Carruur iyo Haween kasoo jeeda Qoysaska dan yarta ee ku nool xeryaha barakacayaasha.
Wasiirka wasaaradda Caafimaadka Galmudug, Naciimo Maxamed Catoosh, ayaa ugu mahad celisay hay’adda Childbirth Survival International , Daweynta iyo baaritaannada Caafimaad ee ay u sameeyeen Hooyada iyo Dhallaanka Soomaaliyeed, waxanay sheegtay in ka wasaarad ahaan ay soo dhaweeyn
doonaan cid kasta oo wax u qabaneysaa danyarta ku nool guud ahaan degaannada Galmudug.
Muxyadiin Cismaan Gabayre oo ka mida masuuliyiinta hay’adda ayaa sababaha keenay in xilligani ay Dawayn iyo baaritaanno caafimaad u sameeyaan Danyarta ku dhaqan duleeddada Gaalkacyo ku sheegay inay yihiin Dad mudan in la caawiyo maaddaama ay haystaan duruufo dhaqaale oo aysan dabbari karin baahiyahooda gaarka ah.
HORESEED IYO HEEGAN KULAN CIYAREEDKA CIIDANKA